Skullose Multiple - Causes
Skelose maromaro dia aretina mifandray amin'ny neurology ary mitranga amin'ny endriny miteraka. Ny dokotera dia manondro azy ireo amin'ny aretina amin'ny autoimmune, izany hoe, ny fanavakavahana amin'ny olombelona dia manomboka amin'ny antony maro samihafa mba hamokarana antikôla sy lymphocytes amin'ny vatana sy sela.
Miaraka amin'ny sclérose multiplication, ny herisetra amin'ny rafi-pandaminana dia natao ho an'ny vatana. Izany hoe, eo amin'ny akorany, antsoina hoe myelin. Io proteinina io dia miaro ny fizotry ny selan'ny niera, ka mamela azy ireo miasa amim-pahombiazana. Ny famotehana an'io akorandriaka io dia mitarika ho amin'ny fihenan'ny atidoha sy ny fahavoazana amin'ny selan'ny nerve.
Ny aretina dia tsy misy ifandraisany amin'ny fahatsiarovan-tena ratsy, satria mety ho ny olona salama izany. Ny aretina sclérose matetika dia matetika tsy amin'ny olon-dehibe, fa eo amin'ny tanora sy ny efa zokinjokiny (hatramin'ny 40 taona) ary na dia amin'ny ankizy aza. Ary ny teny hoe "tsy misy saina" dia tsy miresaka momba ny fifantohan-tsaina, fa momba ny tsy fisian'ny saina, izany hoe ny fihanaky ny fokonolona amin'ny fandringanana ny dibera myelin manerana ny rafi-pitabatabana ao amin'ny atidoha mankany amin'ny tadin'ny hazon-damosina.
Ny vokatry ny sclérose Multiple
Tahaka ny ankamaroan'ny aretin'ny autoimmune, sclerose maro dia mbola mistery ho an'ny mpahay siansa. Tsy mbola fantatra ny tena anton'ny aretina. Ary ny dikan-teny mahazatra dia milaza fa mitranga ny aretina rehefa misy singa mety hampidi-doza, izay mety amin'ny ivelany sy anatiny:
Ny fototarazo . Ny herim-pandaminana dia mitana anjara toerana manokana amin'ny fanombohana ny aretina, saingy mbola hita fa ny havana marary, indrindra ireo rahalahy, rahavavy sy ray aman-dreny dia atahorana kokoa. Ny loza ateraky ny aretina amin'ny kamboty tokana dia miakatra hatramin'ny 30%, raha misy marary amin'izy ireo.
Ny fitiliana ny epidemiolojika dia manampy amin'ny lisitry ny antony mararin'ny sklerose maromaro. Ireo mponina any amin'ireo firenena Scandinaviana, Ekosy ary firenena hafa ao avaratr'i Eoropa dia mety hijaly noho ny any Azia. Hitan'ny olona fa ambony kokoa noho ny an'ny hafa ny habetsahan'ny olona any Etazonia. Ary koa fa ny fiovana eo amin'ny faritra misy ny toeram-ponenana dia mety hiteraka fampivoarana ny aretina raha ny fahatanorana ihany.
Ecology . Voamarina fa ny fihenan'ny ala dia mitombo amin'ny fiankinan-dàlana mivantana avy amin'ny faritra lavitra avy any amin'ny faritra. Ny fihenan'ny sclérose maromaro dia mifandray amin'ny anton-javatra isan-karazany eo amin'ny tontolo iainana, ohatra, ny habetsahan'ny masoandro (ary mifanaraka amin'izany ny habetsahan'ny vitamin D ), izay latsaky ny any amin'ny faritra avaratra izay miha-mitombo ny loza ateraky ny aretina.
Infections . Ny mpahay siansa dia mivoatra amina dikan-teny mikasika ny fifandraisana eo amin'ny fivelaran'ny sclérose sy ny viriosy. Ny fikarakarana manokana dia miankina amin'ireo mpandidy mononucleose, katsaka, gripa ary herpes.
Stress . Tsy misy porofo mivantana an'io teoria io, fa ny teoria fa misy antony ara-psikolojika momba ny fisehoan'ny sklerose maromaro. Maro ny aretina mifandray amin'ny Miaraka amin'ny manam-pahaizana ara-psikôsôma fantatra amin'ny fomba ofisialy ary, satria tsy misy antony ofisialy ny aretina, ny mpahay siansa miasa amin'ity sehatra ity dia mivoatra amin'ny fampivelarana ity teoria ity.
Paul . Ny vehivavy dia marary im-betsaka matetika noho ny lehilahy, ary mifandray amin'ny hormonal background. Voalaza fa ny testosteron hormone lahy dia manafoana ny valim-boka, ary koa ny vehivavy progesterone sy estrogen, izay, rehefa malemy, dia miteraka ny aretina. Izany dia manaporofo izany fa ny fihinanana zana-bolana dia mitombo indraindray ny habetsahan'ny hormones, matetika dia mihen-danja ny endri-tsarobidy rehetra ary matetika no tsy miseho matetika ny fisehon'ny aretina. Saingy aorian'ny fampiterahana, rehefa misy fanitsiana hormonina tsy tapaka, dia mihabetsaka matetika ny aretina vokatry ny aretina.
Fluconazole - ampiasaina
Dyskinesia ny tsinay
Fanitsakitsahana ny sofina - fitsaboana any an-trano
Famaritana ny atrium havia
Vovonan'ny vegetosovascular - fitsaboana
Ny tavy hemorrhagic
Ny labozia tsy mahomby sy mahomby avy amin'ny hemorrhoids
Ny kitapom-behivavy - inona ireo modely tena ilaina amin'ity taona ity?
Makeup - ririnina 2015
Ahoana no hanaovana ny tohatra hazo?
Sakafo fitahirizana - Resipe
Ahoana no fomba anaovana hazo krismasy amin'ny tananao manokana?
Zanaka Indigo - famantarana
Nahoana no ilaina ny karkade?
Toeram-pivoahana ho an'ny trano fanorenana
Sary 3 ho an'ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany
Tablets ho an'ny fitomboan'ny volo
Ahoana ny fisafidianana savaranon-drano?